सुर्खेतको जंगलमा कसरी भयो सामूहिक गौहत्या ? नेपालगञ्जका मेयरले स्वीकारे लापर्वाही – Himshikharnews.com
सुर्खेतको जंगलमा कसरी भयो सामूहिक गौहत्या ? नेपालगञ्जका मेयरले स्वीकारे लापर्वाही
१५ भाद्र २०७६, आईतवार ०७:४०
सरकारले नेपालगञ्जबाट लगिएका गाई सुर्खेतमा मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धानका लागि उपसचिवको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
सामूहिक रुपमा गाईहरु मृत भेटिएको घटनाबारे छानबिनका लागि उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन भएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।
उक्त समितिलाई घटनाको सत्यतथ्य बुझी दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको काञ्जी हाउसबाट लगिएका ३ सय ७० गाईगोरुमध्ये ३१ गाईगोरु वीरेन्द्रनगरको कटकुवास्थित जंगलमा मृत फेला परेका थिए ।
यसअघि कञ्चनपुरबाट ट्रकमा लोड गरेर ल्याइएका गाईगोरु कैलालीको खानीडाँडा जंगलमा भीरबाट खसोलर हत्या गरिएको थियो । अहिले त्यस्तै घटना सुर्खेतमा पनि भएको छ । गजब कुरा त के भने हिन्दु धर्मको एजेण्डा उठाउने गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाटै निर्वाचित धवल शमसेर राणा नेपालगञ्जका मेयर भएकै बेला उक्त उपमहानगरपालिकालाई गौहत्याको आरोप सार्वजनिक रुपमा लाग्न थालेको छ ।
तर यता मेयर राणाले दैलेखको आश्रममा गाईगोरु पु¥याउने क्रममा केही गाइगोरु बाटोमै मरेको र मरेका गाइगोरुलाई सडक छेउमा फालिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण केही गाई मरेको स्वीकार गर्दै गौहत्या गर्यो भनेर प्रचार भइरहेको बताए ।
नेपालगञ्जका मेयर राणाले दैलेखका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाईगोरु त्यता पठाइएको दाबी गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले त्यसको खण्डन गरेको छ । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बाँकेका छाडा चौपाया दैलेख ल्याउन कुनै किसिमको पत्राचार र समन्वय नभएको दाबी गरे । दैलेखका स्थानीय तहले गाई मगाएको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको उनको भनाई छ ।
यता घटना छानबिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले गाईगोरु ढुवानीमा प्रयोग भएका ४ वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ भने ट्रक चालकलाई पनि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका चालकले नेपालगञ्जको काञ्जीहाउसबाट गाईहरु ल्याएको प्रारम्भिक बयान दिएका छन् ।
घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन थप अनुसन्धान भइरहेको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । उनले मरेका गाईगोरुको पोष्टमार्टम गरिएको तर यो विषय अनुसन्धानको क्रममै रहेकाले रिपोर्टबारे अहिले केही बोल्न नमिल्ने बताए ।
तराईका जिल्लामा अहिले छाडा चौपायाको समस्या विकराल बनेको छ । दुधालु हुन्जेल गाई पाल्ने र दूध दिन छोडेपछि सडकमा ल्याएर छोड्ने गलत प्रवृत्तिका कारण यो समस्या विकराल बनेको हो । दूध दिन छोडेपछि गाईलाई सकडमा छोड्नेहरु नै गौहत्या भयो भनेर सडकमा बुरुक बुरुक उफ्रनु थालेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
त्यसैले घाँस पराल नपाएर छट्पटाएर मरिरहेका छाडा चौपायालाई जोगाउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारीबाट स्थानीय सरकारले त पन्छिन मिलेन नै, आम नागरिकले पनि आफ्नो दायीत्व र जिम्मेबारी नभुलिदिए हुन्थ्यो ।